‘मेरो प्रतिस्पर्धा नेपाली फिल्मसँग होइन’ : अनमोल « Ramailo छ
‘मेरो प्रतिस्पर्धा नेपाली फिल्मसँग होइन’ : अनमोल
प्रकाशित मिति : Feb 5, 2018
समय : 3:15 pm
युवा स्टार अनमोल केसी अभिनत पाँचौ फिल्म ‘कृ’ यही शुक्रबार, माघ २६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रदर्शनको प्रतिक्षा सँगसँगै ‘कृ’ बाट अनमोललाई विविध किसिमको दबाब पनि छ ।
निर्माणमै करिब साढे तीन करोड माथि लगानी गरिएको ‘कृ’ ले लगानी सुरक्षित गर्न मात्रै ११ करोडको व्यापार गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो लगानी सुरक्षित गरेर के कृ ले यसअघि ‘छक्का पञ्जा’ श्रृंखलाले बनाएको सर्वाधिक ग्रस कलेक्सनको रेकर्ड तोड्ला त ? ‘म यसै भन्न सक्दिंन’, सोमबार गीत रिलिज पश्चात मिडियासँगको कुराकानीमा अनमोलले भने, ‘फेरी हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली फिल्मसँग होइन । हाम्रो प्रतिस्पर्धा त विदेशी फिल्मसँग हो ।’
उसो त अनमोलको ‘कृ’ सँगै बलिउडमा प्रतिक्षाको रुपमा हेरिएको अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘प्याडम्यान’ पनि नेपालमा रिलिज हुँदैछ । अक्षयको प्याड म्यानले अनमोलको कृ लाई कत्तिको असर गर्ला त ? ‘मलाई लाग्छ नेपाली दर्शकले नेपाली फिल्म नै हेर्नुहुनेछ’, अनमोलले भने । हेर्नुस् अनमोल अदीतिसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी :
गिरी र भुवन केसीको संयुक्त निर्माण रहेको ‘कृ’ लाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा अनमोल र नव नायिका अदीति बुढाथोकी जोडीलाई हेर्न सकिन्छ ।